ERAY-BIXINTA AF SOOMAALIGA: Ka faa’iidayso erayada la dhisay iyo hab-raacooda | Hadalsame Media
Home Ku Biiri Aqoontaada ERAY-BIXINTA AF SOOMAALIGA: Ka faa’iidayso erayada la dhisay iyo hab-raacooda
ERAY-BIXINTA AF SOOMAALIGA: Ka faa’iidayso erayada la dhisay iyo hab-raacooda
(Hadalsame) 08 Abriil 2020 – Eraybixin waxaa ula jeedaa marka fikir, tab ama walax af ama dad aan Soomaali ahayni ay sidaan la isku dayo in loo helo af Soomaali.
Arag cayaarsiiska gaardiga: Dig, digtoonow, nasta, darandoorri, hore soco, dib jeeso, bidix leexo, midig jeeso, joogso iyo kala taga.
Birlab, weyneyso, noole, dulin, il-ma-qabato, qalfoof, walax, curiye, falgal, xagal, xagal qumman, saddex xagal, saddex xagal siman, goobo, afargees, saami, xawaare, karaar
dululaati iyo dhululubo.
Labaatan iyo labo aammustiyo, Shaqal Irmaaneeya
Isku-dare xiriiriye falkaab, ku arkay joornaalka
Mar haddaan amaahsigi ka baxay, lagu agoontoobey
Amiirnimo sin iyo garab jirtey, nagu abuureene
Afafka Qalaad iyo maxaa, eregta ii dhiibey,
Anaa Macallimoo raba dad loo, furo oskuulaade
F.G: Allah ha u Naxariisto akhyaarta aan magacyadooda halkan ku xusay inta dhimatay iyo inta noolba.
Previous articleTrump oo soo jeediyey in dawo tijaabo ah lagu daweeyo RW Britain (Xog ku saabsan dawadan oo loogu bogey Covid-19)
Next article”Sweden waa silicsan tahay!” – Trump oo dhaliilay handaraab la’aanta Sweden & Sweden oo u jawaabtey